Amporisiho ny iPhone App amin'ny alàlan'ny Banner App Smart | Martech Zone
Alakamisy 29, 2012 Alakamisy 7 martsa 2013 Douglas Karr
Ireo mpiara-miasa aminay Postano Mobile, ireo olona nanangana ny iPhone App, dia olona tsy mampino hiara-miasa aminy ary nanangana fampiharana tsy mampino. Raha mbola tsy notsikarinao izy dia mba ataovy! Izahay izao dia manana ny horonantsarinay hiakatra amin'ny fampiharana - azonao atao ny manindry sy milalao azy ireo mivantana avy amin'ilay fampiharana… mahafinaritra be!
Raha tsy fantatrao hoe inona ny id-tarasanao dia azonao atao ny mijery azy iTunes Link Maker. Io no isa aorian'ny id ary alohan'ny mari-panontaniana. Ny anay dia 498000390.
Vantany vao ampianao ny marika meta dia mahafinaritra ny valiny. Safari dia manampy antso ho anao amin'ny fampiharana iPhone izay mamela ny mpitsidika hametraka ny rindranasao mivantana avy amin'ny Smart App Banner!
Tags: iOS 6iPhonefampiharana iphonepostanopostano findaysora-baventy fampiharana marani-tsainasaina maranitra
Trends Fanjifanjana ara-tsosialy ho an'ny trano fisakafoanana 2012